Global Voices teny Malagasy » Adin’ny Rakipahalalana: Fampiasana Weibo Mba Hanosehana Ny Wikipedia Ao Shina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Aogositra 2018 4:39 GMT 1	 · Mpanoratra Rising Voices Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Antsafa, Fanadihadiana Tranga, Fitaovana, Mediam-bahoaka
Tamin'ny 4 Desambra 2013, i Addis Wang  no voalohany namoaka ity lahatsoratra ity tao amin'ny bilaogin'ny Wikimedia ho toy ny Fampiasàna ny media sosialy mba hampandraisana anjara ireo mpamaky sy mpanoaka lahatsoratry ny Wikipedia ao Shina . Navoaka indray niaraka tamin'ny lisansa Creative Commons.
Nandrafitra fomba fijery iray i Addis Wang  toniandahatsoratry ny Wikipedia mba hanapariahana ny fahafantarana ny Wikipedia ao amin'ny Repoblika Entim-bahoaka an'i Shina (PRC). Mampiasa kaonty iray ao amin'ny Weibo  izy sy ireo mpiara-miasa marobe – ilay vovonana media sosialy toy ny Twitter, izay vohikala fahafito ankafizina indrindra ao Shina, mba hampahafantarana ny vontoatin'ny Wikipedia sy ny an'ny vondrom-piarahamonina manontolony ho any amin'ireo Shinoa mpamaky.
Tsy fanamby kely io. Ho an'ny 20%-n'ny mponina erantany monina ao amin'ny Repoblika Entim-bahoaka an'i Shina, ny Wikipedia dia mpifaninana any lavitra amin'ny Baidu-Baike, rakipahalalana sinoa iray tsy mampidi-bola izay ahitana lahatsoratra 6.7 tapitrisa. Sahala amin'ny Wikipedia, fiarahana manoratra ny Baidu. Saingy ireo politikany amin'ny fametahana lisansa amin'ny vontoatiny, ny sivana sy ny famintinana dia tsy misokatra raha mitaha amin'ireo an'ny Wikipedia (nanamarika ihany koa ireo Wikipediàna  fa maro ireo lahatsoratra ao no nadika avy tao amin'ny Wikipedia tamin'ny teny anglisy tsy nasiana fanamarihana).
Angamba ny fibahanan-toeran'ny Baidu dia mety ho vokatra ampahany ihany amin'ny fahazoana voafetra ny Wikipedia ao amin'ny RPC tato anatin'ireo taona farany. Tsy azo notsidihana ny sehatra zh.wikipedia.org tao amin'ny tanibe Shina ny taona 2005 hatramin'ny taona 2008. Ankehitriny, ny Wikipedia dia sehatra manakaikaiky ny faha 150 izay tena be mpanodina indrindra ao Shina (araka ny comScore, ireo tetikasa Wikimedia no faha-5 betsaka mpitsidika indrindra erantany, araka izay voalazan'ny Alexa , ny Baidu no vohikala be mpitsidika indrindra ao Shina). Maro amin'ireo olompirenena shinoa no tsy mahalala akory fa misy amin'ny teniny ny wikipedia, izay mazava be fa mahatonga ny fandraisana anjara ho sarotra kokoa.
Ny hevitr'i Addis , izay ny Wikimedia Foundation Individual Engagement Grant  no manohana ara-bola , dia mitsinjo ny hamahàna ireo olana ireo amin'ny alalan'ny fampiasana media sosialy mba hahazoana ireo vahoaka shinoa marobe ety amin'ny tambajotra . Vovonana iray idealy ny Weibo mba hanmezana andran-tsira ho an'ny olona momba izay azo omen'ny Wikipedia. “Amin'ny teny sinoa, afaka mahazo vaovao marobe ianareo amin'ny teny 140 noho ny amin'ny teny anglisy”, hoy ny fanazavan'i Wang. Ary sahala amin'ny an'ny Twitter, omen'ny Weibo fahafahana mandefa sary ireo mpampiasa azy. Tamin'ny Aprily 2013, nanomboka namoaka famintinana ho anà lahatsoratra Wikipedia iray hafa i Wang sy ireo mpiaramiasa aminy isanandro, teo amin'ny alàlan'ny kaonty Weibo natokan-dry zareo ho amin'izany. 
Ireo lahatsoratra nivoaka voalohany na tsy mahazatra amin'ny ankapobeny no asongadin-dry zareo. Manazava i Wang hoe, “Manandrana mifidy an'ireo lahatsoratra mahaliana izahay mba hisarihana ny sain'ny olona.” Lasa miparitaka be ny sasantsasany amin'ireny lahatsoratra. Ohatra, ny famintinana ny lahatsoratra an'ny Wikipedia amin'ny teny anglisy mikasika ny feon'ireo hoho eo amin'ny solaitrabe  nosoratana tamin'ny teny Shinoa dia nahazo tsidika 52 sy fijery 21 000 nandritra ny herinandro voalohany.
Ireo fanentanana media sosialy ireo dia niteraka fandraisana anjara vaovao tao amin'ny Wikipedia shinoa. Niasa manokana niaraka tamina mpanaraka iray i Wang, ity farany izay lasa liana tamin'ny fandraisana anjara taorian'ilay fanentanana Wikimania, manoro lalana azy manerana ny zotra fampiakarana an'ireo sarina  tonelin-dalamby eo an-toerana izay toerana iray nisian'ny tranga manan-tantara iray  ho an'ny Wikimedia Commons. Mino i Wang fa ny fandraisana anjara dia misy vokany mahomby eo amin'ny tsirairay sy eo amin'ny Wikipedia: “Rehefa mamoaka Wikipedia ianao, mahay zavatra maro”, hoy izy, “eo ampamolavolana hevitra ao an-tsainao ianao amin'izao fotoana izao”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/12/124290/
 Fampiasàna ny media sosialy mba hampandraisana anjara ireo mpamaky sy mpanoaka lahatsoratry ny Wikipedia ao Shina: http://blog.wikimedia.org/2013/12/04/using-social-media-to-engage-editors-in-china/
 nanamarika ihany koa ireo Wikipediàna: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Mirrors_and_forks/Baidu_Baike
 araka izay voalazan'ny Alexa: http://www.alexa.com/topsites/countries;5/CN/
 Ny hevitr'i Addis: https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:IEG/Build_an_effective_method_of_publicity_in_PRChina
 Weibo natokan-dry zareo ho amin'izany.: http://weibo.com/zhwikipedian/
 ny feon'ireo hoho eo amin'ny solaitrabe: https://en.wikipedia.org/wiki/Sound_of_fingernails_scraping_chalkboard
 tranga manan-tantara iray: https://en.wikipedia.org/wiki/1981_Chengdu-Kunming_Railway_Train_Crash